Izeluleko ezi-5 Zokwakha Iphothifoliyo Yezithombe Eziyi-Online - LucidPix
Indlela enhle yokubonisa amakhono akho wesithombe esimangalisayo futhi uqalise umsebenzi wakho wokuba ngumthwebuli wezithombe ukudala iphothifoliyo yezithombe e-inthanethi. Ngenkathi ukuzikhangisa kwimidiya yezenhlalo kubalulekile, amaklayenti amaningi abuka amaphothifoliyo wezithombe ukunquma ukuthi yimuphi umuntu wezithombe angathanda ukusebenza naye. Ukukusiza uqalise, nazi izeluleko ezi-5 ezibalulekile okufanele uzikhumbule ngenkathi udala iphothifoliyo yakho yezithombe e-inthanethi.
Ithiphu # 1: Sebenzisa Isakhi Sephothifoliyo
Ukuze uzisindise isikhathi ngenkathi udala iwebhusayithi ebunjiwe futhi enobuchwepheshe, namathela usebenzisa iwebhusayithi eyakha iphothifoliyo. Bangu amawebhusayithi amaningi okwakha iphothifoliyo atholakalayo, njenge Isikwele sendawo, I-Wix, Futhi WordPress. Ngaphezu kwalokho, amawebhusayithi amaningi okwakha amaphothifoliyo anikela ngezifanekiso ezinhlobonhlobo nezizinda ongazikhetha kuzo. Amaningi ala mawebhusayithi okwakha iphothifoliyo anikela ngezingxenye ezakhelwe ngaphakathi kuwebhusayithi yakho njengeflegi yezithombe zegalari, amathuluzi okubloga, kanye nomklamo weselula ophendulayo. Ukuze uthole ugqozi, bheka lokhu Isibonelo amawebhusayithi wezithombe zesithombe sezithombe.
Icebiso # 2: Yenza Izithombe Zakho Zivelele
Vele, ufuna izithombe zakho neephothifoliyo ziqhamuke ukuze amaklayenti azokwenza ibhizinisi nawe kunokuba abe nabancintisana nabo. Akunakusho ukuthi kufanele uthumele umsebenzi wakho omuhle kakhulu kuwebhusayithi yakho, futhi ugweme ukulayisha zonke izithombe owake wazithatha.
Enye indlela enhle yokwenza iphothifoliyo yakho ivelele ukubonisa izithombe zakho ngendlela eyingqayizivele nenobuchule. Ukufaka izithombe ze-3D kuwebhusayithi yakho yindlela enhle yokwenza lokhu, njengoba ukunyakaza ezithombeni zakho ze-3D kuzokwenza ziphile izithombe zakho nephothifoliyo yakho. Qalisa ngokudala izithombe ze-3D ukulandwa kweLucidPix.
Ithiphu # 3: Hlela Iphothifoliyo yakho
Iphothifoliyo yakho kufanele ihlelwe ngendlela ekhombisa umsebenzi wakho ngefomethi engashintshiwe, ehlanzekile. Gwema noma yiziphi iziphazamiso kuwebhusayithi yakho bese ukhetha a ukubukeka okuncane ngesikimu sombala okhanyayo esikhundleni. Ungahlela izithombe zakho ngezigaba ezahlukahlukene nezindikimba, njengohlobo lwemidiya, usuku, noma indawo. Ngokwengeziwe, iningi lamakhasimende akho angahle afinyelele kuwebhusayithi yakho kuma-smartphones abo, amaphilisi, njll. Ngakho-ke, noma ngabe iyiphi ifomethi oyikhethile ukuhlela iphothifoliyo yakho kuyo, qiniseka ukuthi iwebhusayithi yakho isekhona isebenza kahle kumadivayisi eselula.
Icebiso # 4: Faka imininingwane Yakho Yokuxhumana Kuwebhusayithi Yakho
Noma yiliphi ikhasimende elizofuna usizo lizofuna indlela yokufinyelela kuwe uma lithanda umsebenzi wakho, ngakho-ke kubalulekile ukuthi wethule imininingwane yakho yokuxhumana ngokucacile kuwebhusayithi yakho. Bhala imininingwane otholakala kuyo noma faka a Ifomu elithi “Ngithinte” kuwebhusayithi yakho. Qinisekisa ukuxhumeka wonke amakhasi akho ezokuxhumeka kuwebhusayithi yakho kanye okuphambene nalokho.
Amanye amaklayenti angahle afune ukwazi okuningi ngawe njengomuntu ongaphezu komsebenzi wakho njengomthwebuli wezithombe. Faka ne Ikhasi elithi "Mayelana Nami" ukuxhumana namakhasimende akho ezingeni lomuntu siqu futhi wengeza ubuntu kwephothifoliyo yakho.
Ithiphu # 5: Yakha i-SEO Yephothifoliyo yakho
Ngemuva kokuthi udale iphothifoliyo yakho, kuzodingeka uthathe izinyathelo ezimbalwa ukuqinisekisa ukuthi amaklayenti azobona iwebhusayithi yakho. Indlela ebaluleke kakhulu yokudonsela ithrafikhi kuwebhusayithi yakho iwukuthi yakha i-SEO. Ungakwazi thuthukisa i-SEO yakho, noma i-Injini Yokucinga, ngokufaka ama-URL enjini yokusesha, umbhalo we-alt, nezincazelo ze-meta.
Abathwebuli bezithombe abaningi nabo engeza ibhulogi kwephothifoliyo yabo iwebhusayithi yokuqinisa ukubonakala kwesiza sabo. Zizwe ukhululekile ukuxoxa ngezihloko ezinjengokuthanda kwakho izithombe noma imishini yokuthwebula oyisebenzisayo. Ngokuvuselela ibhulogi yakho njalo, uzokwazi ukwakha i-traffic yamahhala, e-organic esizeni sakho futhi maduze iphothifoliyo yakho izoba idonsa amaklayenti amaningi nabahlanganyeli!
Ungawenza Kanjani Ama-GIF Wabantu Ngezinyathelo Ezi-3 ezilula →← Ungayakha Kanjani i-GIF Nge-LucidPix